Maxaa ilaa iyo hadda u qabsoomay Trump? - BBC News Somali
2 Maajo 2017
Donald Trump ayaa inta uusan xafiiska la wareegin wuxuu ballanqaaday inuu isbedel ku sameyn doono wajiga siyaasadda Mareykanka, ''awooddana uu dib ugu celin doono dadweynaha Mareykanka''. Haddaba maxaa u suurtagalay Trump ilaa iyo hadda?
Madaxweyne Donald Trump ayaa durbadiiba adeegsaday awooddiisa madaxweyne si uu u fuliyo qaar ka mid ah ballanqaadyadiisii ololaha doorashada, taas oo ay ka mid tahay inuu ka baxo heshiis ganacsi oo caalaami ah oo muhiim ah iyo in meesha laga saaro shuruucda ganacsiga.
Waxa uu adeegsaday qaraarro madaxweyne si la mid ah madaxweynihii ka horreeyay ee Barack Obama, hasayeeshee markii uu Trump xilka la wareegay ilaa iyo 21 Abriil waxa uu saxiixay in ka badan inta uu saxiixay ninka uu xilka kala wareegay.
Kalsoonida ay dadku ku qabaan
Mr Trump ayaa inkastoo uu waayay codka guud ee dadweynaha haddana waxa uu ku guulaystay doorashadii 2016, intii ololihiisa doorashada uu socdayna waxaa aad u hooseeyay kalsoonida ay dadku ku qabaan.
Waxa uu la wareegay Aqalka Cad isagoo noqday madaxweynihii ugu shacbiyad yaraa ee xafiiska la wareego. Heerka shacbiyaddiisa ayaa weli sii hoosaysay gaar ahaan marka la barbardhigo madaxweynayaashii dhawaa ee isaga ka horreeyay.
Mid ka mid ah ballanqaadyadii ugu waa weynaa ololihii doorashada Madaxweyne Trump ayaa waxa uu ahaa inuu wax ka qaban doono muhaajiriinta sharcidarrada ah, waxaana muuqato caalamado muujinayo in middaasi ay dhacayso.
Sida lagu sheegay xog ay baahisay dowladda Mareykanka, tirada dadka la joojiyay iyagoo iskudayaya inay Amerika ka soo galaan waddanka Mexico ayaa aad hoos ugu dhacday tan iyo bishii Janaayo, taasi oo ay sheegeen inay tahay calaamad muujinaysa in muhaajiriinta sharcidarrada ah ay dib u dhigeen safarrada ay usoo gali lahaayeen Mareykanka.
100kii maalmood ee ugu horreeyey Trump
Markii uu Barack Obama noqday madaxweynaha 2009, Mareykanka ayaa bartamaha uga jiray dhaqaale kuududsigii ugu xumaa tan iyo 1930-meeyadii, iyadoo dhaqaalahana uu ku kobciyay 800,000 oo shaqo oo uu abuuray bishii ugu horreysay. Hasayeeshee hubanti la'aan dhaqaale oo dhacday ayaa dabayaaqadii sanadkaasi waxa uu Mareykanku wajahay mudadii ugu dheereed ee shaqo lagu abuuro. Saddex bilood kaddib markii uu Trump noqday madaxweynaha ayaa heerka shaqo abuurka waxa uu ahaa mid fadhiyo oo aan sabaynayn, balse tirada shaqooyinka la abuuray bishii Maarso ayaan gaarsiisnayn rajadii laga qabay.
Madaxweyne Trump ayaa ku tilmaamay suuqyada saamiyada inay muujinayaan inay jirto "rajo aad u sarreyso oo uu ganacsiga caalamku leeyahay".
Suuqyada saamiyada ee Dow, S&P 500 ayaa aad sare ugu kacay todobaadyadii ugu horreeyay ee madaxtinimada Madaxweyne Trump.
Hasayeeshee saamiyada saddexdaasi suuq ayaa hoos u dhacay bishii Maarso kaddib markii uu guuldaraystay qorshihii caafimaadka Xisbiga Jamhuuriga.
Markii uu Trump xilka la wareegay ilaa iyo 21 Abriil ayaa waxaa si tartiib ah u kobcay saamiyada suuqa S&P 500 markii loo barbardhigo madaxweynayaashii isaga ka horreeyay.
Mid kale oo ka mid ah ballanqaadyadii doorashada ee Mr Trump ayaa waxa ay aheyd inuu "badelo oo uu meesha ka saaro" barnaamijka Madaxweyne Obama ee Daryeelka Caafimaadka.
Jamhuuriyiinta ayaa waxa ay danaynayeen inay laalaan barnaamijkaasi loo yaqaan Obamacare, inkastoo ay ka faa'iidaystaan in ka badan 20 milyan oo qof oo Mareykan ah oo aan horay u haysan caymis caafimaad.
Hasayeeshee markii la shaaciyay qorshahooda, ayaa hay'ad fedaraal ah oo ka madaxbannaan axsaabta mas'uulna ka ah qiimeynta go'aannada miisaaniyadda ayaa waxa ay sheegtay in qorshahaasi uu 24 milyan oo qof oo dheeraad ah uu ka dhigi doono kuwo aan caymis caafimaad ku jirin marka la gaaro 2026.
Qorshaha ayaa ugu dambayntii meesha laga saaray kaddib markii uu taageero ku filan ka waayay xubnaha Jamhuuriyiinta ee ka tirsan Kongareeska Mareykanka, balse Mr Trump ayaa sheegay inay ka shaqeynayaan qodob sharciyeed kale.
Macluumaadkan wuxuu ka u egyahay wixii u qabsoomay Trump ilaa iyo April 2017